Baarlamaanka Pan Afrika Oo Ka Shiray Xaaladda Amaanka ee Somaliya – SBC
Baarlamaanka Pan Afrika Oo Ka Shiray Xaaladda Amaanka ee Somaliya
Shirkaan Baarlamaanka Pan Afrika uga socda magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika oo ajandayaashiisa ay ka mid ahaayeen arrimaha sugida nabadgalyada iyo xasiloonida Afrika ayaa waxaa warbixin looga dhageystay Danjire Mull Katende oo udhashay dalka Uganda, una qaabilsan Midowga Afrika waaxda Aminga iyo Nabadgalyada kaasoo ka hadlay inta badan Arrimaha Amniga Afrika gaar ahaan wuxuu si weyn uga hadlay isbadalka iyo soo kabashada nabadgalyada dalka Soomaaliya.
Warbixitaan looga hadlayay Amniga Afrika oo dhoor bog ka koobneed ayaa waxaa looga hadlay bog iyo Bar arrimaha Soomaaliya, taasoo muujineysay in qatarta argagixisada ee Soomaaliya ay wali xoogan tahay, balse la sheegay inay dowlada cusub ee Soomaaliya udajisay qorshe labo sano ah soo Afjarideeda.
Xildhibaanada Jabuuti iyo Kenya ayaa difaacay in isku filnaansho la gaarsiiyo ciidamada xooga dalka Soomaaliya si ay uga maarmaan ciidmo nabad illaalin ah, waxayna intaa ku dareen in Soomaaliya hadda ay heshay madaxweyne iyo dowlad cusub oo shacabku taageersan yahay lana filayo inay wax badan iska badalaan xasilooni darada ka jirta guud ahaan Soomaaliya ee saameenta kuyeelatay wadamada dariska la ah.
Xildhibaan Maxamed Cali Fuliye oo ka mid ah xildhibaanada dalka Jabuuti ee Baarlamaanka Pan Afrika ayaa inooga warbixiyay awooda ay wadamada Soomaaliya iyo Jabuuti ku leeyihiin kulanka Baarlamaanka Pan Afrika, wuxuuna tilmaamay inay Jabuuti iyo Somaaliya hayaan labo xil oo qoondo ahaan ay ku hogaaminayaan Gobalka bariga Afrika oo labo iyo Toban wadan ka kooban.
Gudoomiyaha Gudi gobaleedka Bariga Afrika ee Baarlamaanka Pan Afrika xildhibaan Cabdi Xukun oo ah mudane ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya kana hadlay doodii looga hadlayay ammaanka Afrika oo wadamada looga hadlay ay Soomaaliya ka mid aheyd ayaa sheegay in Soomaaliya xagga ammaanka ay sanadihii ugu danbeeyay ay horumar ka sameysay loona baahan yahay in la xoojiyo lana joogteeyo mushaaraadka Ciidamada Xooga dalka.
Madaxweyne Kuxigeenka labaad ee Baarlamaanka Pan Afrika marwo Safiya Cilmi Jabriil oo shir gudoomineysay kulan udhaxeeyay Baarlamaanka Pan Afrika iyo Baarlamaanka Midowga Yurub kana hadashay kulan casho sharaf ah oo looga hadlayay xoriyada warbaahinta iyo wadashaqeynta siyaasiyiinta iyo warbaahinta ayaa sheegtay in loobaahan yahay in wariyaasha Afrika ay helaan tababaro xirfadeed oo kor loogu qaadayo shaqadooda iyo badbaadinta nafsadooda.
Xildhibaan Cabdicaiis Cabdullaahi Maxamed oo ah mudane ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ahna Guoomiyaha Gudi Gobaleedka Bariga Afrika ee Baarlamaanka Pan Afrika oo kahadlay kulan casha ahaa oo looga hadlay xoriyada saxaafada ayaa sheegay kadib burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya in lagu dilay lixdan iyo labo wariye oo ka howlgalayay gudaha Soomaaliya loona baahanyahay sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinkaas ay la kulmayaan bahda Saxaafada Soomaaliyeed.
Shirka Baarlamaanka Pan Afrika ayaa inta uu socdo waxaa looga hadli doonaa arrimaha nabadgalyada, waxsoosaaka, cimilada, xuduudaha, xuquuqda aadanaha iyo dhaqaalaha, waxayna dowladaha ka qeybqaadanaya kawarbixinayaan hadba sida uu horumar uga sameeyay wadankooda ajandayaasha kulanka Baarlamaanka Pan Afrika.